သတင်း - လီဗာ လွှင့်ထူကို စနစ်တကျနှင့် ဘေးကင်းအောင် မည်သို့လုပ်ဆောင်ရမည်နည်း။
လီဗာ လွှင့်ထူကို စနစ်တကျနှင့် ဘေးကင်းအောင် မည်သို့ လည်ပတ်ရမည်နည်း။
1. လက်မောင်းလီဗာ သံကြိုးလွှင့်ထူသည် လွှင့်ထူထားသောဝိုက်နှင့် ပုံသေအရာဝတ္တုကို လုံခြုံစွာပြင်ဆင်ပြီး သံကြိုးချိတ်နှင့် ဆိုင်းငံ့ထားသောလေးလံသောအရာတို့ကို စိတ်ချယုံကြည်စွာ တွဲဆွဲထားသည်။
2. လီဗာ လွှင့်ထူသည် လေးလံသောအရာများကို လွှင့်တင်သည်။ရာထူးကတ်၏ "အပေါ်သို့" ခလုတ်ကို လှည့်ပါ၊ ထို့နောက် လက်ကိုင်ကို နောက်ပြန်လှည့်ပါ။လက်ကိုင်ကို အပြန်ပြန်အလှန်လှန် လှန်လိုက်သည်နှင့်အမျှ အလေးချိန်သည် တဖြည်းဖြည်း မြင့်တက်လာမည်ဖြစ်သည်။
3 မောင်းတံသည် လေးလံသောအရာများကို လွှတ်ချသည်။လက်ကိုင်ခလုတ်ကို ဆိုင်းဘုတ်ပေါ်ရှိ "အောက်သို့" အနေအထားသို့ လှည့်ပါ၊ ထို့နောက် လက်ကိုင်ကို နောက်ပြန်လှည့်ကာ လက်ကိုင်ကိုဆွဲလိုက်ခြင်းဖြင့် အလေးချိန်သည် ချောမွေ့စွာကျဆင်းသွားမည်ဖြစ်သည်။
4. လီဗာလွှင့်ထူချိတ်၏ အနေအထားကို ချိန်ညှိခြင်း။ဝန်မရှိသောအခါ၊ ညွှန်ပြချက်ပေါ်ရှိ “0” သို့ ခလုတ်ကို လှည့်ပါ၊ ထို့နောက် သံကြိုးချိတ်၏ အပေါ်နှင့် အောက် အနေအထားများကို ချိန်ညှိရန် လက်ကိုင်ဘီးကို လှည့်ပါ။၎င်းသည် သံကြိုးကို လက်ဖြင့်ဆွဲခြင်းဖြင့် သံကြိုးချိတ်၏ အနေအထားကို အလွယ်တကူနှင့် လျင်မြန်စွာ ချိန်ညှိနိုင်စေရန်အတွက် ratchet ကို ဖယ်ထုတ်သော pawl ဖြစ်သည်။
မောင်းတံကိုအသုံးပြုတဲ့အခါ ဘာတွေကို သတိထားသင့်လဲ။
1. ဝန်ပိုသုံးခြင်းအား တင်းတင်းကျပ်ကျပ် တားမြစ်ထားပြီး ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲ လက်ကိုင်ကို အရှည်ထားရန် တင်းကြပ်စွာ တားမြစ်ထားပြီး လူအင်အားမှလွဲ၍ အခြားသော ဓာတ်အားများကို အသုံးပြုရန် တင်းကြပ်စွာ တားမြစ်ထားသည်။
2. လေးလံသော အရာဝတ္ထုများကို သယ်ဆောင်သည့်အခါ၊ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာ မတော်တဆမှုများကို ကာကွယ်ရန် ဝန်ထမ်းများသည် မည်သည့်အလုပ်မဆို သို့မဟုတ် လေးလံသော အရာဝတ္ထုများအောက်တွင် လမ်းလျှောက်ခြင်းအား တင်းကြပ်စွာ တားမြစ်ထားသည်။
3. အသုံးမပြုမီ၊ အစိတ်အပိုင်းများသည် နဂိုအတိုင်းဖြစ်သည်၊ ဂီယာအစိတ်အပိုင်းများနှင့် lifting chain တို့သည် ကောင်းမွန်စွာချောဆီဖြစ်ကြပြီး idling condition သည် ပုံမှန်ဖြစ်ကြောင်း အတည်ပြုရပါမည်။
4. အသုံးမပြုမီ အပေါ်နှင့် အောက်ချိတ်များကို ခိုင်မြဲစွာ ချိတ်ဆွဲထားခြင်း ရှိမရှိ စစ်ဆေးပါ။ဝန်အား ချိတ်၏ ချိတ်ပေါက်၏ အလယ်ဗဟိုတွင် သက်ရောက်သင့်သည်။ဘေးကင်းစေရန်အတွက် lifting chain သည် မှားယွင်းစွာလိမ်ပြီး ကွေးခြင်းမဖြစ်ရပါ။
5. အသုံးပြုနေစဉ် ဆွဲငင်အားကို တွေ့ရှိပါက ၎င်းကို ချက်ချင်းရပ်ပြီး စစ်ဆေးပါ-
A. လေးလံသော အရာဝတ္ထုသည် အခြားအရာများနှင့် ပတ်သက်မှုရှိမရှိ၊
ခ။ လွှင့်တင်ထားသော အစိတ်အပိုင်းများ ပျက်စီးနေသလား။
ဂ။ လွှင့်ထူထားသော အလေးချိန်ထက် ကျော်လွန်နေသလား။
6. တရားမ၀င် လုပ်ကိုင်ခွင့်မပြုဘဲ မိုးရေထဲတွင် သို့မဟုတ် အလွန်စိုစွတ်သောနေရာတွင် ထားရန် ခွင့်မပြုပါ။
7.6တန် လွှင့်ထူ၏ အောက်ဝိုက်အား သံကြိုးတန်းနှစ်ခုကြားတွင် လှည့်ပတ်ရန် တင်းကြပ်စွာတားမြစ်ထားသည်။
8. အသုံးမပြုမီတွင် လီဗာ လွှင့်ထူ၏ မေးရိုးများ ပြင်းထန်စွာ စုတ်ပြဲခြင်း ရှိ၊ မရှိ၊ ဝါယာကြိုးကို အစားထိုးသင့်သလား၊ ဘရိတ်မျက်နှာပြင်တွင် ဆီရွှံ့အညစ်အကြေးများ ရှိနေခြင်း ရှိ၊
9. ၎င်းကိုအသုံးပြုသည့်အခါ၊ ၎င်းအား လက်လီဗာသံကြိုးလွှင့်တင်မှု၏စံနှုန်းနှင့်အညီ အသုံးပြုရမည်ဖြစ်သည်။အသုံးပြုနေစဉ်အတွင်း အန္တရာယ်မဖြစ်စေရန်အတွက် ဖဲကြိုး၏အရှည်ကို အလိုအလျောက်မရှည်ပါနှင့်။
10. Manual lever hoist ကိုအသုံးပြုပြီးနောက်၊ ၎င်းကို အချိန်မီ သန့်စင်ပေးသင့်သည်။သန့်ရှင်းရေးနှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုပြီးနောက်၊ ဝန်မတင်စစ်ဆေးခြင်းနှင့် လေးလံသောဝန်စမ်းသပ်ခြင်းတို့ကို ဆောင်ရွက်သင့်သည်။Manual lever hoist သည် အခြေအနေကောင်းကြောင်း အာမခံပြီးနောက်၊ လေ၀င်လေထွက်ကောင်းပြီး ခြောက်သွေ့သောနေရာတွင် စနစ်တကျ သိမ်းဆည်းထားသင့်သည်။
စာတိုက်အချိန်- မတ် ၂၂-၂၀၂၂